Aver SVC 100 Video Conferencing Webcam ~ ICT.com.mm
HomeAver SVC 100 Video Conferencing Webcam
Aver SVC 100 Video Conferencing Webcam
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ People Video Resolutions: HD1080p (1920 x 1080), up to 60fps,HD720p (1280 x 720) HDMI supported resolutions: 1080p (1920 x 1080),720p (1280 x 720),D1 (720 x 480),SXGA (1280 x 1024)... [Learn more]
Brand: AverSKU: 162476N/ASee more: Aver, Conferencing System, New Arrivals, Products, Shop, Vortech, Web Conferencing SystemFilter by: USD, Webcams
People Video Resolutions: HD1080p (1920 x 1080), up to 60fps,HD720p (1280 x 720)
HDMI supported resolutions: 1080p (1920 x 1080),720p (1280 x 720),D1 (720 x 480),SXGA (1280 x 1024)
DVI(digital)Support Resolution: 1080p (1920 x 1080),720p (1280 x 720)
Video features: Video features
Video inputs: Main camera eCam PTZ III,HDMI for 2nd camera,DVI-I/VGA for presentation,HDMI for presentation
Video outputs: HDMI x 2
Audio features: Automatic gain control (AGC),Advanced noise reduction,Acoustic echo cancellation (AEC)
Audio inputs: Microphone pickup range of 6m, daisy chain up to 4,HDMI,Line-in (3.5 mm)
Network: 10/100/1000Mbps,NAT/firewall traversal (H.460),High Efficiency Lost Packet Recovery (HELPeR™),API support via Telnet
Security: AES (Advanced Encryption Standard) function (128-bit),Password protection for system settings
Power supply: AC 100V ~240V, 50/60Hz,Consumption: EIAJ 12V, 6.25A
Meeting recording: In meeting and offline recording,Save directly to USB flash drive,Supports screen re-layout during playback,Playback and file conversion via VCPlayer software (.mov and .mp4 format)
EZMeetup software/App: 30-day for free trial,Connect with H.264 video codec,Receive resolution up to full HD 1080p at 30fps,Transmit resolution up to full HD 1080p at
30fps,Support content sharing, capture and recording
EZDraw App: Import .JPG, .PNG, .GIF and .BMP files,Export .PNG files,A maximum of 10 devices can be connected
ScreenShare software (Wirelessly share content): Yes
VCLink software (Control and Sharing in smartphone): Yes
VCAssist software (Intelligent Meeting Assistant): Yes
Dual monitor support and SnapShot: Yes
Speed dialing via hot keys: 10 sets
Camera presets: 100 positions
Firmware update via USB flash drive: Yes
Screensaver and auto power off mode: Yes
Camera: Dual camera and dual content image by Side-by-Side or PIP (4 Video Transmission simultaneously includes Primary camera + 2nd camera +2Different contents),SCSI storage device settings
Built-in SIP server: Up to 100 Registrations, 50 Pair calling
Pre Order: Waiting time3weeks
ပစ္စည်းမှာပြီး ၃ ပတ်ထိကြာမြင့်ပါမည်။
အင်တာနက်ဗီဒီယို Call ခေါ်ဆိုမှုအတွက် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ WebRTC, SIP နဲ့ H.323 တို့ ပါဝင်လာတဲ့ Aver အမှတ်တံဆိပ် SVC100 Video Conferencing Webcam ဖြစ်ပါတယ်။ WebRTC, SIP နဲ့ H.323 တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ AVer ရဲ့ Omni-Protocol Support က အသုံးပြုသူတွေကို တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူချိတ်ဆက်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ SVC က သူ့ရဲ့ Protocols တွေကနေ ဗီဒီယို Call ခေါ်ဆိုမှုအတွက်သာမကဘဲ Content တွေကို လက်ခံရယူတာ၊ မျှဝေတာနဲ့ တိုက်ရိုက်ပြသတာတွေကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ Web Real-Time Communication (WebRTC) က Chrome သို့မဟုတ် Firefox တို့လို Web Browser တွေကနေ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လို့ ရစေမှာပါ။ WebRTC ရဲ့ Browser အခြေပြု Video Conferencing Platform ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Slide တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ Sharing ပြုလုပ်နိုင်သလို Live Customer Support အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ (License upgrade ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်) ကင်မရာနှစ်လုံး သို့မဟုတ် Presentation နှစ်ခုကို တပြိုင်နက်ပြသပေးနိုင်တဲ့အတွက် မိမိနှစ်သက်ရာ ကင်မရာတစ်ခုကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်သလို နှစ်ခုလုံးနဲ့လည်း တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ Input အမျိုးမျိုးကို ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အတွက် အသုံးပြုသူက HDMI နဲ့ DVI/VGA ထဲက Input တစ်မျိုးမျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Real-Time Messaging Protocol (RTMP) ပါဝင်တဲ့အတွက် Live Video Streaming လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Presentation ပြုလုပ်တာ၊ စကားပြောတာ၊ သင်ခန်းစာပို့ချတာ စတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း တိုက်ရိုက် Live ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။ အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တဲ့အပြင် တိုက်ရိုက် Live ဆက်သွယ်မှုကို ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ မှတ်တမ်းတင် Record ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Internal Storage အဖြစ် 32GB ပါဝင်တဲ့အတွက် မိမိရဲ့ Live Video တွေကို သိမ်းဆည်းဖို့ USB Drive အသုံးပြုနေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ iSCSI လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် မိမိရဲ့ဒေတာတွေကို Cloud ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားချင်ရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
Integration of WebRTC, SIP and H.323The SVC100 now comes equipped with AVer Omni-Protocol Support for WebRTC, SIP, and H.323, providing users with more diverse and easy to use collaborative communication possibilities. In addition to Omni-Protocol Support, the SVC is capable of receiving, sharing, and streaming content across all of its connection protocols.
Total price:K11,972,091 K11,948,265
This item: Aver SVC 100 Video Conferencing Webcam K11,912,524